Markii hore waa Lovren, Iminkana van Dijk oo Weerar ku qaaday Sergio Ramos…..(Maxaa lagu heystaa Kabtanka Real Madrid??) – Gool FM
Markii hore waa Lovren, Iminkana van Dijk oo Weerar ku qaaday Sergio Ramos…..(Maxaa lagu heystaa Kabtanka Real Madrid??)
(Liverpool) 17 Nof 2018. Dejan Lovren ayaa waayahaanba weerar ku hayay Sergio Ramos isagoo ugu dambeyn xitaa dhawaan si live ah u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu Suxul ku dhufto daafaca reer Spain, van Dijk oo isna Daafaca kaga ciyaara Liverpool ayaa iminka qeyb ka soo noqday weerarka lagu hayo Kabtanka Real Madrid.
Virgil van Dijk ayaa sheegay in dhigiisa xulka qaranka Spain ee Sergio Ramos uusan ahayn difaaca ugu fiican kubada cagta.
Daafaca reer Holland ayaa Raphaël Varane u arka daafaca Wanaagsan si la mid ah sidii uu horey uga dhawaajiyay saaxiibkii Lovren.
“Sergio Ramos ma ahan daafaca ugu fiican aduunka, waa ciyaaryahan weyn, waan ixtiraamayaa guulaha uu ka gaaray kubada cagta, lakiin maahan nooca daafaca aan doonayo”.
“Waxaan aniga door bidayaa Raphaël Varane inuu yahay kan wanaagsan, waa ciyaaryahan da’ayar ah, wuxuuna ku soo guuleystay waxyaabo badan”.
Dhinaca kale Virgil van Dijk ayaa wuxuu ka hadlay dhaawaca uu Sergio Ramos u geestay Mohamed Salah kulankii finalka Champions League ee xili ciyaareedkii lasoo dhaafay.
“Ma aqaano hadii uu si ula kac ah u sameeyay, laakiin marka uu ciyaarta ka baxay Mohamed Salah waxaa gabi ahaanba is badalay qaab ciyaareedka kooxda Real Madrid”.
“Si lama filaan ah Marcelo, Benzema, Ronaldo, ayaa waxay bilaabeen inay hareereeyaan ciyaartoydeena da’ada yar sida Alexander-Arnold, waxayna gabi ahaanba kasoo tageen dhinaca midig, marka uu Salah garoonka ku sugnaa ma aysan dhicin inay sidaas sameeyaan”.